अन्ततः एमालेमा योगेश भट्टराईले बाजी मारे ! - Media Dabali
काठमाडौं – नेकपा एमालेले विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन हुँदा सचिव योगेश भट्टराई लगायत नेताहरू एमालेमै रहे । नेता माधवकुमार नेपालसँग नजिक हुँदाहुँदै पनि नेताहरूले एमाले छाड्न सकेनन् ।
एमालेमै रहने शर्त थियो, पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउने सहमति कार्यान्वयन । यसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमत भएका थिए । तर कतिपय सन्दर्भमा जेठ २ गतेमा फर्काउन ओली सहमत भइरहेका छन् ।
हालै चर्चामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी पूर्ववत् सहमतिअनुसार उपाध्यक्ष भीम रावललाई दिन अध्यक्ष ओलीले आनाकानी गरे । ओलीले इन्चार्जको जिम्मेवारी पूर्व माओवादी नेता लेखराज भट्टसँग नै रहने स्पष्ट पारेका छन् ।
उपाध्यक्ष रावलले पूर्ववत् जिम्मेवारी नपाएको अवस्थामा सचिव योगेश भट्टराईले भने बाजी मारेका छन् । सचिव भट्टराईले जेठ २ गतेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउँदै प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
हालका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले आज शुक्रवार पार्टी कार्यालयमा विभागको बैठक राखेर आफू अब विभागमा नरहेको र जेठ २ गतेकै संरचनाअनुसार भट्टराई प्रमुख हुने घोषणा गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एमाले एकता हुनुअघि एमाले प्रचार विभाग प्रमुखमा भट्टराई रहेका थिए । जेठ २ गतेअघि योगेश भट्टराई प्रचार विभाग प्रमुख हुँदा पनि सूर्य थापा उपप्रमुख र विष्णु रिजाल सचिव रहेका थिए ।
हाल रिजाल विदेश विभाग उपप्रमुख बनेका छन् । थापा नेकपाकालमा पनि नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रचार विभाग प्रमुख हुँदा पनि उपप्रमुख रहेका थिए ।
सचिव भट्टराईले प्रमुखमा फर्किंदा पनि थापा प्रचार विभाग उपप्रमुख नै रहने भएका छन् ।
विभागका सदस्यमा पहिले र अहिलेका मिलाएर बनाइने भएको छ । ज्ञवालीले प्रचार विभाग छाडेको भए पनि प्रवक्ता कायमै रहने जनाइएको छ ।
एमालेमा जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउने बहस चलिरहेका बेला सचिव भट्टराईले भने बाजी मारेका छन् । बागमती प्रदेश इन्चार्जमा समेत उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पुनः जिम्मेवारी नदिएर पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई इन्चार्ज बनाइएको छ ।
योगेश भट्टराई बोलिरहँदा बज्यो अश्लिल भिडियो
पर्यटनमन्त्रीले फेरी गरे यति ठूलो चलखेल, चौतर्फी हंगामा!
कोरोना कहरमा कम्युनिस्ट मन्त्रीले रातारात पशुपति विकास कोषमा ४३ जना कार्यकर्ता भर्ती गर्दै
नेपाल–भारत उडान सुरु गर्न योगेश भट्टराई र विनयमोहन क्वात्राबीच छलफल
योगेश भट्टराई र पार्वत गुरुङ आवश्यक परे राजीनामा दिन्छु भनेर घुर्की लगाउँछन्, तर किन दिन सक्दैनन् ?
नेकपाले योगेश भट्टराईलाई दियो ठूलो जिम्मेवारी, अरु युवा हेरेको हेर्‍यै
सोमवार, पौष २० २०७७०६:१०:५५
# प्रचण्ड # नेकपा # योगेश भट्टराई